2012 – Happy Birthday, Angel ! – Thet Nandar
2012 – Happy Birthday, Angel !
Posted on January 16, 2012 July 3, 2014 by Thet Nandar
သမီးလေး မွေးနေ့မှာ ပြင်ဆင်ထားသော မိသားစု စားပွဲ
သမီးလေး အကြိုက် ပန်းရောင် ကာလာ နှင့် မင်းသမီး ပန်းကန်၊ မင်းသမီး လက်ကိုင်ပုဝါ၊ ရေခွက် …
သမီးလေး အတွက် မာမီကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ပေးထားသော မိသားစု မွေးနေ့ ညစာ စားပွဲ
တအိမ်လုံး သမီးကြိုက်တဲ့ ပန်းရောင်တွေ ပဲ ဒီဇိုင်းဆင်ထားတာမို့ မျက်နှာကျက်မှာ ပန်းရောင် ဘောလုံးများနှင့် မွေးနေ့ အလှဆင်ပေးထားပါတယ်။
သမီး နှင့် သားသား က ဒီလိုမျိုး အိမ်ကို အလှဆင်ထားရင် ပျော်ရွှင်မြူးနေတာပါပဲ …
မီးလုံး အလင်းရောင် အလှ …
မွေးနေ့ရှင် ” သမီးလေး ” နှင့် သားသား
မွေးနေ့ ပီဇာ မစားသေးခင် …. ဓါး နှင့် ခက်ရင်းကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကိုင်တွယ်ပီး စားပြနေတဲ့ ပုံ …
သားသားက ခက်ရင်းကိုင်တာပဲ ကျွမ်းကျင်သေးပေမယ့် သူ့ မမ စားတာမြင်တော့ လိုက်လုပ်ချင်စိတ် ရှိတယ်။ မာမီက ကူညီပေးတာတောင် အကူအညီ မလိုချင်ဘူး ဖြစ်နေသော … ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး စိတ်ရှိသော သားသား …
စားပီး လက်ကိုင်ပုဝါ နှင့် သပ်သပ်ရပ်ရပ် သုပ်ပြနေသော သမီးလေး
မွေးနေ့ ပီဇာ စားနေသော မောင်နှမ နှစ်ယောက်
ခက်ရင်းနဲ့ပီဇာကို ထိန်းပီး ဓါးနဲ့ လှီးဖြတ်နေတာ …
မမ စားသလို လိုက်စားနေသော သားသား
ပီဇာ နောက်တချပ် ထပ်စားအုံးမယ်နော် မာမီ …
သမီး ကိုယ်တိုင် မုန့်ဖုတ်ထားသော မွေးနေ့ ကိတ်မုန့်
ကြယ်ပုံစံ ဖယောင်းတိုင်ကို မွေးနေ့ကိတ်မုန့်မှာ စိုက်နေသော မောင်နှမ ၂ယောက်
ဒယ်ဒီက ဖယောင်းတိုင် မီးညှိပေး
သမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့ ကိတ်မုန့် နှင့် အတူ မိသားစု အမှတ်တရ အချိန်
သမီးလေး ဘုန်းကြီးပါစေ … အသက်ရှည်ပါစေ … ကျန်းမာပါစေ … ကံကောင်းပီး ပျော်ရွှင်မှု့ အပေါင်း နှင့် ပြည့်စုံပါစေ … အနှောင့်အယှက်များလည်း ကင်းဝေးပီး သွားလေရာ လာလေရာ အရပ်ရှစ်မျက်နှာတိုင်းမှာ စိတ်ထားကောင်းသော သူတော်ကောင်းများနှင့်သာ တွေ့ကြုံ ဆုံစည်းပါစေ … သမီးလေး ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါစေ … မွေးမေမေမှ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ပြည့်ပါစေသော်ဝ် …. ပြည့်စေသော်ဝ် ….
မွေးနေ့ရှင်မှ မွေးနေ့ ဖယောင်းတိုင် မီးငြိမ်းနေတဲ့ ပုံ
ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ယူနေတာ …
မောင်နှမ နှစ်ယောက် ကိတ်မုန့် လှီးနေတဲ့ပုံ …
** အရင်ပိုစ့် ** ….
Categories: My kid's childhood life
6 thoughts on “2012 – Happy Birthday, Angel !”
Happy birthday to Angel !!!
Ma Ma Chaw Su
ပန်းရောင် မွေးနေ့ပွဲ အရမ်းလှတာဘဲ။
YIN YIN ZAW
Anonymous, Chaw Su and Yin Yin Zaw …..
I apperiate yours times and Thank you for Birthday Wishes to Angel.
Previous2012 – မွေးနေ့ ပီဇာ
NextShwedagon Pagoda # 1